Detail of Zone
How MIA can help
ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း တောင်းခံစာနှင့် ဆန္ဒပြုလွှာပုံစံ ပေးပို့ခြင်း
အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ဆန္ဒပြုသူ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
MIA CEC EC(2017-2019)
ဆန္ဒမဲပေးမည့် အသင်းဝင်များ သိသာရန်
အသင်း၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အထိ (၃)နှစ် သက်တမ်းအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်ဆန္ဒပြုသူများအား ဆန္ဒမဲပေးမည့် အသင်းဝင်များသည် အသင်းဝင်ဖြစ်ကြောင်း အသင်းဝင်ကဒ် (သို့) အထောက်အထားတစ်ခုခု တင်ပြဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ (၃)နှစ် သက်တမ်းကာလအတွက် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံ ဆန္ဒပြုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်-
(၁) ပြည်ထောင်စုသမ်္မတမြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။
(၂) အရွေးခံပုဂ်္ဂိုလ်သည် အသက် ၂၅နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။
(၃) အသင်း၏ သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ လိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
(၄) အသင်းဝင်သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်ပြီး နှစ်စဉ်ကြေးမှအစ ပေးရန် တာဝန်များကို အသင်းသို့ ပေးသွင်းပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
(၅) မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၌ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင်သက်တမ်း တစ်ခု အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ သိသာပါရန်
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ (၃)နှစ် သက်တမ်းအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို ၂၆. ၁၁ . ၂၀၁၆ (စနေနေ့) နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် အမှတ် (၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် အဆောက်အအုံ၊ (၆)လွှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်း ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် အသင်းဝင်များ တက်ရောက် ဆန္ဒမဲပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
(၁) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၃၁ ရက် မတိုင်မီ အသင်းဝင်ထားသူများအားလုံး မဲပေးခွင့်ပြုမည်။
(၂) အသင်းဝင်ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား အသင်းဝင်ကဒ်ပြ၍ ဆန္ဒမဲ ထုတ်ယူခွင့်ပြုမည်။
(၃) အသင်းနှစ်စဉ်ကြေး အကျေအလည် ပေးဆောင်ပြီးကြောင်း ပြေစာဖြတ်ပိုင်း (သို့) အသင်းဝင်ကဒ်အကြီး တင်ပြရမည်။
(၂) အရွေးချယ်ခံပုဂ်္ဂိုလ်သည် အသက် ၂၅နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။
(၄) အသင်းဝင်သက်တမ်း တစ်နှစ်ပြည့်ပြီး နှစ်စဉ်ကြေးများကို အသင်းသို့ ၁၅ . ၁၁ . ၂၀၁၆ တွင် အကျေအလည် ပေးသွင်းပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၅) မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၌ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင်သက်တမ်း တစ်ခု အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ် ခံခွင့်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် အခြေခံစဉ်းစားရမည့်အချက်များ
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများကို အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက် ပါဝင်စေခြင်းဖြင့် အသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် အသင်းသူအသင်းသားများ၏ အကျိုးကျေးဇူး ရရှိရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြမှသာ အသင်း၏ ဂုဏ်သိက်္ခာမြင့်မားပြီး အများယုံကြည်လေးစားရသော အသင်းကြီး တစ်သင်း ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင် ကိုယ်စားလှယ်များကို မဲဆန်္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အမှုဆောင်ရာထူးအလိုက် မဲဆန်္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် လည်းကောင်း သတိထားပြီး အသင်းအတွက် ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် အမှုဆောင်ကောင်းများအဖြစ် ရွေးချယ်သင့်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အသင်း၏ အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံမည့်ပုဂ်္ဂိုလ်များတွင် ရှိသင့်ရှိထိုက်သော အရည်အချင်းများမှာ -
၁။ အသင်းမှ သတ်မှတ်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပြည့်စုံသူ၊
၂။ အကျင့်စာရိတ်္တ ကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေးကျင့်ဝတ် (Business Ethic) သိက်္ခာ၊ သမာဓိတို့နှင့် ပြည့်စုံသူ၊
၃။ အသင်းမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုများတွင် တွေးခေါ်၊ ကြံဆ ဆွေးနွေးဦးဆောင်နိုင်သူ၊
၄။ အသင်းမှ ပေးအပ်သည့် တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊
၅။ အသင်း၏ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ကိုင်ရာတွင် အချိန်ပေးပြီး စိတ်စေတနာထားပြီး အတ်္တနှင့် ပရ မျှတစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊
၆။ အချိန်ပေး၍ အသင်း၏လုပ်ငန်းများကို တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊
၇။ အသင်း၏ အကျိုးအတွက် ထိရောက်သော အကြံဥာဏ်ကောင်းများပေးပြီး အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊
၈။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံ၍ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊
၉။ အသင်းသူအသင်းသားများ၏ ယုံကြည်လေးစားထိုက်သူဖြစ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ နိုင်ငံ၏အကျိုး၊ အသင်းသူ အသင်းသား၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအကျိုးပြုသူစသည့် အရည်အချင်း၊ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံသူများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
No.29, UMFCCI Building 6th floor, Min Ye KyawSwar Street,
Lamadaw Township, Yangon , Myanmar.
Phone: 95-1-2314 830, 2314 831
Fax: 95-1-2314 832
To implement the main objectives, Myanmar Indus- tries Association involves itself in the following activities and provision of services:
Co-operate with law experts in constructing Foreign Direct Investment Law, Small and Medium Enterprises Development Law, Industrial Policy and Investment law.
Organizing and arranging business matching, business opportunities networking between local and foreign enterprises.
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar. © Copyright 2012 by Myanmar Industries Association.